Soo dejiso isha ugu raaxada badan ee IKEA ee aad waligaa aragtay | Abuurista khadka tooska ah
Haddii IKEA ay marar badan yaabto, waa iyada oo ay sabab u tahay awooddeeda hal-abuur si aad u jebiso shaagagga oo aad noo keento wax ka duwan. Markan waxay ahayd farta bilaashka ah ee loo yaqaan 'Soffa Sans' oo aad si fudud u fahmi karto maxaa yeelay waa nooca ugu raaxada badan ee abid la abuuray.
Shirkadda weyn ee guryaha IKEA ayaa soo saartay Soffa Sans sida isha ugu raaxada badan taasna waxaa dhiirrigeliyay isla macaamiisha ku ciyaaraysay qalabkiisa si loo abuuro sofa. Waa mid ka mid ah fikradahaas awooda u leh abuuritaanka isbeddel iyo in aan hubaal ku arki doonno summad kale oo weyn.
Waxay ku jirtay xisaabta rasmiga ah ee IKEA Twitter halka laga shaaciyey isha cusub iyo in ay ku saleysan tahay aaladda internetka ee IKEA oo la yiraahdo VALENTINE. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto riyadaada fadhiga adigoo jiidaya oo ridaya walxaha kala duwan ee ka dhigaya inaad sameysato mid kuu gaar ah.
Waxaan aad u jeclaanay hal abuurkaaga qorsheeyaha softi aad bay u dhiiri galisay font weligeedba. La kulan SOFFA SANS. Halkan ka degso https://t.co/ZdMyFuahqM pic.twitter.com/IIHnDHWwFO
Fikradani waxay ka timid xaqiiqda kaliya ee ah aaladda internetka ayaa loo adeegsaday qorista farriimaha, sidaa darteed qaar ka mid ah maskaxda hal-abuurka ah ee IKEA ayaa la yimid iyagoo u rogaya cinwaan bilaash ah oo la soo dejisan karo oo noocyo kala duwan iyo cabirro ah ka socda websaydhka IKEA.
Weyn, haa? Dhammaantoodna way ka yimaadeen maskaxdaada fur fur markay macaamiishaadu isticmaalaan aaladaha aad dhigatay ee ay ku hayaan. Ma jiraan jawaab celin ka fiican iyo dhacdooyin ka fiican kuwa ka soo bixi kara macaamiishaas kuwaas oo u isticmaali doona aaladahaas siyaabaha ugu layaabka badan ee suurtogalka ah.
Sidoo kale waa awood leeyihiin xiriir wax ku ool ah iyo xiriir aad u gaar ah taasi waxay ka dhigeysaa astaantaada mid gaar ah. Waxaan horeyba u ognahay in daacadnimadu ay ka muhiimsan tahay xiriirka ka dhexeeya noocyada iyo macaamiisha. Macaamiil qanacsan ayaa iibin doona wax ka badan dhammaan kumanaanka euro ee aad ku bixin karto xayeysiinta. Ha moogaan ilaa Nuux.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » IKEA xarfaha bilaashka ah ayaa ah nooca ugu raaxada badan ee abid la abuuray